Google inotambanudza risingagumi Meet mafoni evashandisi veGmail kusvika Kurume 2021
Muri pano: musha / Technology News / famba / Google inotambanudza risingagumi Meet mafoni evashandisi veGmail kusvika Kurume 2021
Google iri kuwedzera isina muganho Meet vhidhiyo kufona kune vashandisi veGmail kusvika Kurume 31, 2021.
Iyo perk yakatanga kugadzirirwa kupera muna Gunyana 30.
Google iri kubvuma chokwadi cheakawedzera COVID-19 denda.
Google's risingagumi yemahara Sangana nevhidhiyo kufona yeakaundi maakaundi ichagara kwemwedzi yakati wandei Iye wekutanga internet ane akawedzerwa (via Neowin) iwo asingagumi-kureba kutaura kubva kwavo kwekutanga Nyamavhuvhu 30 kupera zuva kusvika Kurume 31, 2021. Mahara emahara mafoni aimbove akaganhurirwa kune awa imwe neimwe.
Zvichingotaura, Google iri kubvuma kuti mhedzisiro yeiyo COVID-19 dambudziko ichagara kwechinguva. Vanhu vazhinji havazove nesarudzo kunze kwekungopemberera mazororo nekupinda zviitiko online, Google yakati, uye zvisingagumi Kusangana nhare kuchaona kuti vanogona "kugara vachikurukura" mumwedzi inotevera.
Read more: Mashandisiro aungaita Google Kusangana
Iyo kambani yakaratidza kuti Meet akakura mumwedzi ichangopfuura, kusanganisira Chromecast-based mafoni paTV yako uye kumashure kukanganisa maitiro ekuvanza zvakashata zvako kumba. Vhidhiyo hurukuro dzevachengeti veGmail account dzakabatwa pavashandisi makumi mashanu, asi vese G Suite uye vatengi vezvidzidzo vanogona kuva nevatori vechikamu mazana maviri nemaviri uye vanorekodha mafoni avo.
Kufamba kwacho kuri pachena kunofanirwa kuchengetedza kusangana nemakwikwi nevhidhiyo yekukurukura nevakwikwidzi kufanana Zoom uye Facebook Messenger Makamuri. Kana Google ikasapa zvisina muganho emahara kufona, zvine njodzi yekurasikirwa neimwe nzira vakavimbika Vanosangana nevashandisi. Izvi hazvireve kuti zvinokuswededza kuti usangane, asi zvinogona kukuchengetedza iwe kana uine sarudzo yemapuratifomu ehurukuro dzako chaidzo.
Heino mitambo yese iri kuuya ku PlayStation 5 uye Xbox Series X muna 2021
Google Meet vs Google Hangouts vs Google Duo: Ndeupi musiyano?